Shiinaha toban kun oo caday timo ayaa qaab jilicsan loogu talagalay ma dhaawici karaan warshada ciridka iyo soo saarayaasha | Enyuan
toban kun oo caday timo ayaa si jilicsan loogu talagalay ma dhaawici karaan ciridka
Burushka caday ee tobanka kun ah waxay isticmaalaan tikniyoolajiyad beerto cufan oo dalool weyn leh, laba laab oo jilicsan oo kala duwan, ku lug leh sayniska loo yaqaan 'cryptographic science', si tartiib ah u duub ilkaha, cirridka duugista, iyo isku xirka cadaadiska ciridka
magaca sheyga toban kun oo caday timo
Dhexroor cadayo 0.127mm
Cusbooneysii cilmi baarista iyo horumarka, hal-abuurnimada ballaaran
Badeecadeena waa la casriyeeyay lana horumariyey si loo keydiyo nusqaanno badan oo loogu talagalay daadinta dib u socodka. Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada beerista cufan ee daloolka weyn, waa nadiif waana aamin marka la cadayayo.
Taabasho burush oo tayo leh
Gacanka burushka ee aan naqshadeynay wuxuu ku saleysan yahay mabda'a ergonomics, kaas oo ku habboonaan kara calaacasha gacanta oo leh raaxo raaxo leh. Waa shaqo-badbaadin, dabacsan oo raaxo leh in la isticmaalo.
Faa'iidooyinka alaabta; toban kun oo cufnaan sare leh oo cufan oo raaxo leh, hufnaan sare iyo shaqooyin badan, dhadhanka suufka, fiilooyin buraashka oo aad u fiican, oo yar sida 0.127mm. Jilicsan oo aad u jilicsan, jilicsanaanta jilicsan ee laba jibbaaran, si tartiib ah u duub ilkaha, duug cirridka adiga oo aan waxyeello u geysan cirridka. Madaxa burushka waa loo balaariyay si uu ugu weynaado dusha xiriirka meesha ilkaha dushiisa, nadiifintuna meel badan ayey taalaa.
Taxaddarrada isticmaalka cadayga Adkaysiga cadayga iyo caafimaadkaaga, xusuusnow inaad qallajiso cadayga markasta oo aad cadayato. Ka dib markaad isticmaasho cadayga in muddo ah, waxay ururin doontaa tiro aad u tiro badan oo bakteeriyo ah, fungi iyo microorganisms. Markaad cadayato ilkahaaga, dhig cadayga tuubada hoosteeda si xoog ahna u rux si aad u nadiifiso, ka dibna cadayga hawo u qalajiso. Markaad dhigeyso burushyo badan, ha is taabanin si looga hortago in fayrasyada hargabka ama hargabku ku faafin cadayga. Ku rakibida shelf shelf guriga oo dhigi kara burushka caday ee qaaliga ah kharash badan kuma baxo, laakiin waxay u fiican tahay caafimaadka qoyska oo dhan.
Hore: Caday cadayga guriga tayo sare leh guriga
Xiga: Caday jilicsan oo burush burush jilicsan caday